Izimbali Zophayinaphu Omisiwe + Isifundo Sevidiyo - Izindlela Zokupheka
Uzenza kanjani izimbali zikaphayinaphu ezinhle ezomile
Ungakholelwa ukuthi le mbali enhle yenziwa ngophayinaphu osikiwe? Ngizothembeka, bengingabaza ngale ndlela ekuqaleni! Kepha empeleni ilula impela, futhi bavele baba bahle kakhulu!
Lezi zimbali zikaphayinaphu ezomisiwe ziyahlafuna, zimnandi, futhi zimnandi, futhi bekuyimihlobiso yekhekhe ephelele yendodakazi yami, iphathi yosuku lokuzalwa luka-Avalon's Moana.
Ngesikhathi ngisakhula besomile izithelo kakhulu. Ubaba wami ukhulele epulazini eliseNew Zealand ngakho-ke ukuwafaka emathinini, ukumisa ukudla nokomisa kwakuyinto ejwayelekile ekhaya. Izithelo zami ezomile ezazithandwa kakhulu kwakungama-apula. Ihlala imnandi kakhulu futhi ithambe kakhulu kunohlobo oluthengwe esitolo.
Ubaba wami wayene-dehydrator enkulu yokhuni ayezakhele yona futhi unyaka nonyaka sasiqoqa izithelo eziningi ngangokunokwenzeka, sizendlale kumatreyi anezikhala nezithelo ezomile. Kwaphela amasonto uzwa iphunga elimnandi lezithelo lisuka endlini yethu lize lehle ngomgwaqo.
waqale nini ukuhlasela umunwe ophakathi
Angizange ngome izithelo eziningi njengombhaki kodwa njengoba indodakazi yami ikhula, bengilokhu ngiqhubekela phambili ezintweni engafuni ukuzenza kuphela kodwa ukuzidla. Ngakho-ke amaqebelengwane amahle kwesinye isikhathi abekwa eceleni kwendlela ukuvula indawo Ama-gummies enziwe ekhaya , ama-muffin we-chocolate chip, futhi amakhukhi kashukela .
Naye Usuku lokuzalwa olunetimu kaMoana eza, angikwazanga ukumelana nokwenza amakhekhe ezimbali zikaphayinaphu amahle amnandi ephathini lakhe!
Ingabe izimbali zikaphayinaphu kulula ukuzenza?
kungani wasnt will smith ngosuku lokuzimela 2
Ekugcineni, lezi bezilula kakhulu ukuzenza futhi ZISEBENZE ngokuphelele! Ingxenye eyisicefe kunazo zonke bekumane kususa “amehlo” kuphayinaphu.
Kungithathe futhi isikhashana ukuthola ukuthi i-hang yokusika uphayinaphu mncane kakhulu. Ngakwenza kwaba nzima kimi futhi ngangisebenzisa uphayinaphu ovuthiwe kakhulu, ngakho wawunamanzi amaningi futhi uthambile. Ngingancoma ukuthi usebenzise uphayinaphu ongavuthiwe kancane uma ufuna izimbali ezishisayo. Njengoba simisa izimbali emzimbeni, asidingi uphayinaphu ovuthwe kakhulu.
Ungakhathazeki, ukujabulele kakhulu ukudla imbali yophayinaphu iyenqaba! Ungasula izingcezu ezibukeka zixakile bese uzisebenzisa njengesidlwana esinempilo. Yum!
Amathiphu wokwenza izimbali zikaphayinaphu ezinkulu ezomisiwe
Khetha uphayinaphu ongavuthiwe kakhulu. Uphayinaphu ovuthiwe kancane uzobamba ukwakheka kwawo kangcono lapho usisika futhi usikwa.
Ungakhiphi ingqikithi. Musa ukusebenzisa uphayinaphu corer ukususa isikhumba sangaphandle ngoba udinga isikhungo siphelele ukwenza lezo zimbali zikaphayinaphu ezinhle.
Ungakhathazeki ngamaphethelo amagebhugebhu. Uma izingcezu zakho zigcina zibukeka zimanikiniki kancane, zivele zengeze ekubukekeni okuphelele kwembali.
obani abadlali abakhulu kunabo bonke ku-nba
Uzenza kanjani izimbali zikaphayinaphu omisiwe
Hlangisa i-ovini iye ku-200ºF
Sika phezulu nangaphansi kukaphayinaphu wakho ngommese obukhali
Gweba isikhumba sangaphandle
Sebenzisa i-peeler yamazambane ukususa amehlo amancane nxazonke zikaphayinaphu. Lokhu kungithathe cishe imizuzu eyi-15.
Sika uphayinaphu wakho kancane kakhulu bese ubeka izingcezu kumathawula wephepha ukuze ususe umswakama owedlulele.
Beka izingcezu zikaphayinaphu eshidini lekhukhi eligcwele umata wokubhaka we-silicone ukuvimbela ukunamathela
Bhaka imizuzu engama-90 (ngaphezulu uma engakabi nsundu emaphethelweni noma ebukeka omile). Flip them over emva kwemizuzu engama-60 ngakho-ke khuthaza ngisho nokoma.
Uma usomile, zisuse eshidini lekhukhi bese uzifaka kukathayela wamakhekhe ukuze zome ubusuku bonke ekamelweni lokushisa.
Zavelaphi izimbali zikaphayinaphu?
Ababhaki baseNingizimu basebenzise izimbali zikaphayinaphu njengomhlobiso odumile wekhekhe le-hummingbird. Ikhekhe le-hummingbird lifana kakhulu nekhekhe lesanqante kepha lingenazo izaqathe. Imnandi impela ihlanganiswe neqhwa likakhilimu ushizi.
Ungasebenzisa izimbali zikaphayinaphu ukuhlobisa amakhekhe, amakhekhe kanye namanye ama-dessert! Babukeka bebahle kakhulu!
Izimbali zikaphayinaphu zihlala isikhathi esingakanani?
Izimbali zikaphayinaphu zingaba yifloppy futhi zithambe uma uzishiya ngaphandle isikhathi eside kakhulu. Zigcine esitsheni esingangeni manzi ekamelweni lokushisa kuze kube yizinsuku ezintathu kepha empeleni, zihlala isikhashana.
Izimbali zikaphayinaphu ezomile kulula ukuzenza! Mane nje usike bese usika uphayinaphu omusha, womise izingcezu kuhhavini bese umise ethinini lamakhekhe. Uzothanda ukuthi zimangalisa kanjani lezi zimbali zikaphayinaphu ukubheka amakhekhe, amakhekhe namakhekhe! Isikhathi sokulungiselela:amashumi amabili amaminithi Isikhathi Sokupheka:1 hr 30 amaminithi Omiswe:3 amahora
▢1 okulingene uphayinaphu akuvuthwanga kakhulu
▢Umbhede wokubhaka we-Silicone
Hlangisa i-ovini yakho iye kuma-225 degrees F.
Usebenzisa ummese wompheki obukhali, usike phezulu nangaphansi kukaphayinaphu.
Beka uphayinaphu umile, bese unquma uqweqwe ube yimichilo, usebenze ujikeleza uphayinaphu.
Ngokuphela okubukhali kwesikhumba samazambane, susa amehlo kaphayinaphu, ugcine inyama eningi ngangokunokwenzeka.
Ngophayinaphu ohlangothini lwayo, sika izingcezu ezincanyana. Okuncane ongakuthola, kulapho izimbali zakho ziba ntekenteke ngokwengeziwe.
Beka izingcezu zikaphayinaphu kumathawula wephepha bese uyomisa ukuze ususe umswakama omningi.
Beka izingcezu zikaphayinaphu ebhodini lokubhaka elifakwe umata we-silicone bese ubhake imizuzu engama-90, noma kuze kube nsundu emaphethelweni.
Ngenkathi izingcezu zisafudumele futhi zithambile, susa izimbali zikaphayinaphu ebhodini lokubhaka bese uzifaka kukathayela wamakhekhe ukuze zipholile ngokuphelele.
Vumela ukupholisa ubusuku obuthile phezu kwemithi ukuthola imiphumela emihle.
Gcina esitsheni esingangeni manzi kuthebulethi kuze kufike ezinsukwini ezintathu.
Kuya ethuneni: Isikhathi Sokuqeda Lokhu Kungaba Yithi, Kepha Wena ... Meme
Isiqephu Esesabekayo Se-Mirror Esimnyama Siza Ngokuyiqiniso E-China
UScott Disick no-Amelia Hamlin Kubikwa ukuthi Bahlukanisiwe (UPDATE)
Ngabe Konke Lokho Okwenziwayo Esiqeshini Sokuqala Abantu v. O.J. USimpson Wenzeka Ngempela?
Okukhethekile: Bukela i-Trailer ekhulile yesizini 3 Yesizini Esiphakathi
Uthatha isikhathi esingakanani ukusetha ushokoledi omnene
okuzenzela ikhekhe elimhlophe zokupheka kusuka ekuqaleni
owenza kumdlalo wemfashini oyimfihlo we-victoria 2016
indlela yokwenza ikhekhe elinemibala eminingi
UTrevor Noah noTomi Lahren Babhekene neTrump, KKK, kanye neBlack Lives Matter kuDaily Show
Ozibiza ngendabuko uTomi Lahren uhlala phansi noTrevor Noah ukuthola uhlobo lwengxoxo ongayilindela kuThe Daily Show.
Okungcono Kunobulili Kungathi Kungcono Kunobulili
I-meme yakamuva enempilo inabantu ababala izinto kangcono kunezocansi nobuhle bayo.
Isifundo Sama-Strawberries Ehlanganisiwe
Umhlahlandlela ophelele wokwenza ushokoledi ophelele wamboza ama-strawberry usebenzisa umhlophe omhlophe, ubisi noshokoledi omnyama.